Ihe ị ga-ahụ ma mee na Aix-en-Provence, France | Akụkọ Njem
Ihe ị ga-ahụ ma mee na Aix-en-Provence, France
Emi odude ke edem usụk France, Aix-en-Provence Uwe ejiji na ìhè pụrụ iche, nwere ọtụtụ ụbọchị anwụ na-acha na nnukwu ihu igwe. Ìhè a na agba nke Provence bụ ihe dọtara ndị na-ese ihe dị ka Cézanne, bụ onye sitere n'ike mmụọ nsọ nke obodo a mara mma n'ọtụtụ ọrụ ya. A mara mma nke ukwuu na anabata obodo, n'ebe gabigara njem na ndị mmadụ juru ebe.
Aix-en-Provence bụ ezigbo ebe chọpụta ezigbo ndị enyi France na ihunanya. Obodo mara mma nke nwere ọtụtụ nkuku iji chọpụta. Ebe zuru oke iji zuru ike mgbe ị na-anụ ụtọ ihu igwe kachasị mma na ọdịdị ala magburu onwe ya. Chọpụta ihe niile ị nwere ike ịhụ ma mee n’obodo a dị nso na Marseille.
1 Soro nzọụkwụ nke onye sere ese Cézanne
2 Ngosi ihe mgbe ochie na Aix-en-Provence
3 Katidral Saint-Sauveur
4 Isi n'ámá
5 Usoro Mirabeau
6 Otu esi aga Aix-en-Provence
7 Ebe ịnọ na Aix-en-Provence
Soro nzọụkwụ nke onye sere ese Cézanne
Ọ gaghị ekwe omume ileta Aix-en-Provence na-enweghị chọrọ ịhụ saịtị nke ya kasị ama agwa, na onye na-ese ihe Cézanne. Cézanne raara ọtụtụ ọrụ ya n'igosi oghere dị n'obodo ahụ, ebe ọ hụrụ ịhụnanya nke Aix-en-Provence. Amuru ya rue rue de l'Ópera ma nwuru na Boulegon. Otu n'ime ebe ndị a na-agakarị bụ Cézanne Workshop, ebe ọ na-ese ihe kwa ụbọchị site na 1902 ruo 1906. Ebe a na-arụ ọrụ taa na-egosi na ụlọ ngosi ihe mgbe ochie kachasị mma n'ụwa. Ebe dị mma ma dị jụụ nke nwere ike ịkpali onye ọ bụla, ọ bụ ezie na ọ gaghị ekwe omume ịse foto n'ime. Anyị na-aga n'ihu na Bastida del Jas de Bouffan, ebe maara nke ọma na Cézanne ebe ọrụ mbụ ya malitere na ebe obibi maka ya. Na Bibemus Quarries anyị nwere ike ịhụ ụcha ocher nke ukwuu nke masịrị onye na-ese ihe na mpụga obodo ahụ.
Ngosi ihe mgbe ochie na Aix-en-Provence
Na mgbakwunye na ebe onye na-ese ihe Cézanne si n'ike mmụọ nsọ, na Aix-en-Provence anyị nwere ike ịchọta ọtụtụ ụlọ ngosi ihe mgbe ochie ndị ọzọ ileta. Na Granet MuseumDịka ọmụmaatụ, ọ dị na ụlọ mara mma, na ụlọ ochie nke Malta. Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ otu n'ime ihe kachasị mkpa n'obodo ahụ, ebe ọ bụ na ọ nwere ọrụ sitere na XNUMXth na narị afọ nke XNUMX na ndị edemede dị ka Cézanne ma ọ bụ Rembrandt. Na Vasarely Foundation anyị ga-ahụ ihe ngosi dị iche iche n'ime afọ. Na Hotel de Gallifet anyị ga-ahụ ụlọ nka na mpaghara Mazarin, na nnukwu ụlọ nke narị afọ XNUMX nke nwere ụdị ihe ngosi niile. The Planetárium bụ ebe zuru oke maka ezinụlọ, ebe ọ nwere ọrụ maka ụmụntakịrị.
Cheta na Aix-en-Provence wuru na a obodo ochie roman. Katidral Saint-Sauveur bụ ụlọ okpukpe ya kachasị mkpa, ma wuo ya kpọmkwem n'ụlọ nsọ nke Apollo, n'etiti narị afọ nke XNUMX na nke XNUMX, yabụ ụlọ ahụ nwere ụdị dị iche iche. Stylesdị ndị a kacha pụta ìhè, ma n'ọnụ ụzọ ma n'ime ime, bụ ngwakọta nke Romanesque na Gothic.
La Plaza d'Albertas Ọ bụ otu n'ime ihe kachasị mma n'obodo niile. Ebe dị ka nkuku udo na obodo nwere okporo ámá ndị dị warara. Ebe o nwere isi iyi dị n’etiti, obí eze anọ gbara ya gburugburu. Na mgbakwunye, anyị agaghị echefu na a makwa obodo a dị ka nke nwere otu puku isi iyi, yabụ o yikarịrị ka anyị ga-achọta isi iyi mgbe ọ bụla n'ama anyị hụrụ. Plaza de la Mairie bụ ihe ọzọ kwesịrị ịhụ. Ya na isi iyi ya na ụfọdụ ụlọ ndị a ga-ahụrịrị, dịka Halllọ Nzukọ Obodo ma ọ bụ Clọ Elu Elekere, yana elekere mbara igwe ya. N'ụbọchị Sọnde, ha na-ere ahịa akwụkwọ ahịa nke abụọ, na-enwekwa ọtụtụ ebe a na-ere ahịa na mbara ala iji zuru ike.
Uringgagharị mpaghara a nke obodo bụ otu n’ime ihe ndị kachasị mma ịme. Zọ dị n'akụkụ ya mma ụlọ mmanya na ụlọ oriri na ọ .ụ .ụ, na site na obí eze nke narị afọ nke iri na asaa na nke iri na asatọ na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime ebe ndị a ma ama ịnọ ụbọchị ahụ n'obodo. Ọ bụkwa oghere na-ejikọ agbata obi Mazarin, nke bụ mpaghara kachasị ọhụrụ, yana Ville Comptale, nke bụ mpaghara ochie.
Otu esi aga Aix-en-Provence
Ga ebe a dị na ndịda France dị mfe, anyị nwekwara ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ. Ọ bụrụ na anyị na-abata na ụgbọelu, nke na-abụkarị ndị kasị nkịtị, na ọdụ ụgbọ elu kacha nso dị Marseille, nke dị kilomita iri abụọ na ise. Nhọrọ ọzọ dị mfe ma dịkwa mfe bụ iji ụgbọ oloko dị elu, nke ọdụ ya dị kilomita 25. O nwere ahịrị ụgbọ ala ndị jikọtara ya na obodo ahụ n'ụzọ dị mfe. Ọ bụrụ na anyị abịarute n’ụgbọ ala, ụzọ ụgbọ ala bụ nhọrọ kacha mma n’ihi ịdị nfe ha, n’agbanyeghi na ha dị oke ọnụ.
Ebe ịnọ na Aix-en-Provence
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịmata obodo nke Aix-en-Provence na omimi, anyị nwere ike ịnọ na mpaghara ochie, ma ọ bụ n'akụkụ Cours Mirabeau, ebe a ma ama ebe ọtụtụ họtel dị na ebe ịchọta ezigbo ụlọ dị mfe. Ọ bụrụ na anyị chọkwuru udo, anyị nwere ike ịbanye n’obodo ndị gbara ya gburugburu, ọ bụ ezie na anyị ga-elele njikọ njem mgbe niile iji hụ ma ọ bara uru.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Ihe ị ga-ahụ ma mee na Aix-en-Provence, France
N'oge okpomọkụ na Paris, ọdọ mmiri kacha mma iji jụụ